फेरि कमल थापा र कृष्ण दाहालको चुनावी भिडन्त – fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट
काठमाडौं,१२ कात्तिक। मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ का मतदाताका लागि चौथो पटक पनि दुईमात्र विकल्प आउँदैछन्-कमल थापा रोज्ने कि कृष्णप्रसाद दाहाल ? २०४८ सालदेखि २०५६ सम्म तीनओटा आम निर्वाचनमा चलेको रोचक प्रतिस्पर्धा १८ वर्षपछि फेरि दोहोरिँदैछ । लोकतान्त्रिक गठन्धनको तर्फबाट राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा मकवानपुर १ मा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्ने निश्चित भइसकेको छ । वामपन्थी गठबन्धनमा मकवानपुरको दुबै क्षेत्र एमालेको भागमा परेको छ र १ मा कृष्ण दाहाल उम्मेदवार बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । पार्टीको क्षेत्रीय कमिटीबाट निवर्तमान सांसद अनन्त पौडेल र दाहालको नाम सिफारिस भएको छ । तर, क्षेत्र नम्बर १ मा दाहाल र २ मा केन्द्रीय सदस्य बिरोध खतिवडाले टिकट पाउने एमाले स्रोतले जनाएको छ । दुवैलाई चुनावी तयारीमा जुट्न निर्देशन दिइसकनुभएको छ।
कमल थापा र कृष्ण दाहालको प्रतिस्पर्धा यो पहिलो होइन । बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछिका तीन चुनावमा यो क्षेत्रमा कमल थापा र कृष्ण दाहालकै भिडन्त भएको छ। दुवै संविधानसभा चुनावमा भने दुई नेतामध्ये एक छान्नुपर्ने अवस्था यहाँका मतदातालाई आएन । २०६४ मा कमल थापा क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवार भएको । २०७० मा उहाँले श्रीमती प्रमिला थापालाई क्षेत्र नम्बर १ बाटै उम्मेदवार बनाएको तर, आफू चाहिँ समानुपातिमा बसेको। एमाले नेता कृष्ण दाहाल २०६४ र ७० दुवै चुनावमा उम्मेदवार बन्नुभएन् । १८ वर्षपछि थापा र दाहालको फेरि एकै ठाउँमा भेट हुँदैछ । पञ्चायतकालिन राजनीतिका हस्ति कमल थापाले बहुदलीय व्यवस्थायता मकवानपुरबाट चार पटक चुनाव लडिसक्नु भएको छ, जसमध्ये एक पटकमात्र उहाँले सफलता पाउनुभएका छ । यसपटक उहाँ पाँचौ पटक चीर परिचित प्रतिद्वन्द्वी कृष्ण दाहालसँग प्रतिस्पर्धा गदैहुनुहुन्छ । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा मकवानपुर १ मा एमालेका दाहालले थापालाई करीव ५ हजार मतान्तरले पराजित गरनुभएको थियो । दाहालले १४ हजार १८४ मत पाउँदा थापा ९ हजार ८२५ मतका साथ दोस्रो हुनुभएको ।
२०५१ को मध्यावधी निर्वाचनमा भने परिणाम उल्टियो । कमल थापाले १६ हजार ७५३ मत पाएर सांसद जित्दा दाहाल १५ हजार ८२ मतका साथ दोस्रो भए । थापा मकवानपुर २ बाट पनि चुनाव लडनुभएको थियो । तर, एमालेका बिरोध खतिवडासँग पराजित हुनुभयो । २०५६ को आम निर्वाचनमा फेरि परिणाम उल्टियो । कमल थापालाई कृष्णप्रसाद दाहालले करीव ५ हजार मतान्तरमै पराजित गरनुभयो । दाहालले २० हाजर ४४२ मत पाउँदा थापाले १५ हजार ९८५ मत पाउनुभयो । हालसम्मका तीनवटा भिडन्तमा दाहालले दुई पटक जितनुभएको छ, भने कमल थापाले एक पटकमात्र । यो चुनावमा थापाले दाहाललाई जितेर बराबरी पुर्‍याउने कि दाहालले हृयाट्रिक गर्ने ? यो नै अहिले मकवानपुरको रोचक बहस हो । मकवानपुर १ अन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका १५ वटा वडाका साथै वागमती गाउँपालिका, वकैया गाउँपालिका र मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १, २, ३ र ४ पर्छ ।